Summer. Likhinyabeze hot ... ... kvass Good ucime ukoma ngesikhathi sokushisa. Futhi lokho ukudla kulesiya simo sezulu ongancintisana okroshka? Kodwa hhayi kusuka kunoma imaphi kvass esingazilungisa lokhu dish - esitolo amnandi asifanele. Udinga ezinhle iresiphi kvass for hashi, yokuthi lesi siphuzo ayegcwele, enamakha, abukhali futhi nonacidic.
Hash - ukudla omuhle kushisa, lapho lutho ufuna ukudla, kodwa olandela nonesifiso esijulile ukuphuza, aphuze futhi. Okroshka hhayi kuphela ucime ukoma, kodwa futhi babulawa yindlala. Izithako: imifino, ukhukhamba, radishes, anyanisi oluhlaza, amazambane, inyama kanye-abilisiwe noma umvimba, amaqanda kanzima abilisiwe, ngoba refueling - ukhilimu omuncu. Imikhiqizo nginikeze isidumbu sakho zonke izakhamzimba ezidingekayo futhi ukulandelela izakhi. Optionally, ungakwazi ukwengeza lwesinaphi noma horseradish, ushukela. Zonke imikhiqizo fake zimfundiso ziba yize, kungakho igama dish. kvass Okuhle Ngomsebenzi hashi uyisidingo. Indlela ukupheka?
Kvass iresiphi for hashi
Kulula futhi sisheshe ukulungisa kvass asuselwe emikhiqizweni lulwimi siphelile zidayiswa ezitolo, kodwa lokhu phisa mnandi futhi kufanelekile kuphela njengoba isiphuzo. Recipe kvass okuzenzela for hashi ukuthola kweso. iresiphi ngamunye okuthile okuhlukile, kodwa ngokuyisisekelo bona ezifanayo. Ukulungisa edingekayo isiphuzo breadcrumbs, desirably esinkwa se-rye, amanzi, ushukela, nemvubelo. Ngezinye amalitha amathathu amanzi ingxenye ngokwanele wesithathu isinkwa, omunye itiye spoon imvubelo (ngaphandle phezulu), 150 g ushukela.
Kvass ngokuba hashi kufanele kube ebukhali futhi omuncu. Lezi izindawo amnike imvuthu esinkwa se-rye. Isinkwa kufanele uthathe cubes ezincane futhi omile kuhhavini on ukushisa low ukuze zambozwa amnyama uqweqwe flavorful. Crackers ayikwazi ashise ngokusebenzisa, kungenjalo bayokudla ukunikeza kvass ukunambitheka ababayo. Ngaphezu kwalokho, lesi siphuzo ingalungiswa ngezindlela ezimbili.
Indlela yokuqala yokwenza kvass
amabhisikidi eliphekiwe ukugcwalisa imbiza, uthele amanzi abilayo. Sokunika phambi amanzi egcwele indlu. crackers Steamed nesinkwa kvass ukunambitheka ocebile, umbala omnyama. Nzima okuqukethwe izimbiza, engeza imvubelo kanye noshukela, wafaka endaweni emnyama ekamelweni lokushisa amahora 3-5. Thela ibhodlela, engeza elikhuhluziwe ka 3-5 ngamunye, eduze uvalwe futhi esiqandisini. Omisiwe ukunikeza kvass nokucija. Leresiphi ngoba kvass okroshka muhle ngoba akudingekile ukusebenzisa njalo uphuza uhlobo.
Eyesibili indlela yokwenza kvass
Okokuqala, kudingeka alungiselele imvubelo. Embizeni ezintathu-litre ugcwalise crackers enziwe 1/4 ingxenye isinkwa, uthele amanzi afudumele, wafaka 150 g ushukela, nemvubelo teaspoonful bese efakwa endaweni emnyama ukuze lwalungabola for cishe 12 amahora. Drain, uthele abilisiwe afudumele anosawoti noma manzi ahlanzekile, engeza imvuthu kanye ucezu lwesinkwa fresh bese efakwa endaweni emnyama for ukuvutshelwa. ke akudingekile ukuze ungeze imvubelo. Ngakho ukuphinda futhi. Ngale ndlela sizokwazi ukwenza ukunyamalala iphunga Braga. Esikhathini nkinga alandelayo ahlanzekile crackers Soggy nesinkwa, futhi ucezu lwesinkwa fresh kanye nedlanzana crackers ukwengeza. Ungase futhi aphonse 8-10 omisiwe ngoba ukukhanya. kvass okunjalo iresiphi for hashi muhle ngoba walungisa imvubelo izothatha isikhathi eside.
Indlela ukupheka kutyu kahle futhi ngalokho isikhathi
Yeka indlela okulula ukuyeka ??? E-usikilidi ingakusiza !!!